Famaritana Constant hafainganam-pandeha (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V) - China AOXIN HVAC PART
Famaritana Constant hafainganam-pandeha (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V)
Refrigerant Type Frequency TOSIKARATRA Series Model Ari
hihena fahaiza fahan'ny EER POLISY
SQ036UA 36.000 10.551 3.333 10.8 3,17
LG Compressor sy ny maotera manome fitsipika manan-danja sy ho samihafa ny mpanjifa maharitra amin'ny fanatrarana izao tontolo izao kilasy Eco-namana & angovo famonjena teknolojia. Tokoa LG dia nivoatra hatrany vondrona avo-machining fametrahana mazava tsara sy ny fivoriana teknika teknolojia avy voangony izao tontolo izao noho ny hiteraka maharitra singa tsara indrindra sy manome vahaolana tanteraka inverter optimisé ho an'ny toeram-ponenana sy ny tontolo iainana ara-barotra mba hanafaka ny haavon'ny fahafaham-po ny mpiara-miasa rehetra.
Optimisé Compressor Haavo
Tamin'ny alalan'ny fanerena na ny lehibe sy ambany ny zana-kazo mitsangana mpiray noforonina izay Manatsara fampifanarahana sy ny fahombiazana amin'ny fampihenana fanoherana.
Haavo dia optimisé sy ny lanjany dia nihena tamin'ny alalan'ny fanerena ny ambany toetsika ho any amin'ny akorany vatana ary avy eo welding.
Gas Force rafitra
Soso-kevitra rafitra tombo-kase dia mety ho disadvantageous ny entona force rafitra noho ny mety leakage izay afaka mitranga amin'ny alalan'ny tombo-kase tendron'ny ravin fangatahany fahazoan-dalana. Gas force rafitra mampiasa ny fanerena kafa mba asio tombo-kase horonan-taratasy napetraka ary manamaivana leakage, dia toy izany no mahatonga azy ho afaka hanao ny mari avo compressor fahombiazana.
New famerenana rafitra
Fanampiana lalana tamin'ny horonan-taratasy ny mihodina Manatsara compressor Restart miasa amin'ny alalan'ny famelana voafandrika kafa tsindry entona haingana ny compressor afa-nandositra tamin'ny tonga nijanona.
Previous: Famaritana Constant hafainganam-pandeha (R22, LSS)
Next: Constant famaritana ny hafainganam-pandeha-2 Generation (R410A, LSS 60Hz 1Φ, 208-230V)
High fahombiazana As Compressor
High fahombiazana Scroll Compressor
Home As Compressor
Mitsivalana Scroll Compressor
Scroll Air-javatra mampahalefaka Compressor
Famaritana-Constant hafainganam-pandeha (R410A, 1Piston 6 ...
Famaritana-Constant hafainganam-pandeha (R410A, R407C / 1P ...
Famaritana Constant hafainganam-pandeha (R22, LSS)